विश्वकाे सबैभन्दा बढी दैनिक संक्रमित र मृत्यु संख्या भारतमा ! « News24 : Premium News Channel
विश्वकाे सबैभन्दा बढी दैनिक संक्रमित र मृत्यु संख्या भारतमा !
काठमाडाैँ, १ भदाै । पछिल्लाे समय काेराेना संक्रमणकाे केन्द्र भारत बनेकाे छ । त्यहाँ दैनिक संक्रमित र मृत्यु हुनेकाे संख्या अहिले विश्वमै सबैभन्दा धेरै रहेकाे छ ।
आइतबार भारतमा एकैदिन ५८ हजार १०८ जना नयाँ संक्रमित फेला परेकाे वर्ल्डाेमिटर्सकाे तथ्यांकले देखाएकाे छ । जुन अन्य देशकाे भन्दा सर्वाधिक दैनिक संक्रमित संख्या हाे । आइतबार त्यहाँ काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या पनि अरू देशकाे भन्दा बढी ९६१ रहेकाे छ ।
यससँगै अहिलेसम्म भारतमा काेराेना संक्रमित हुनेकाे संख्या २६ लाख ४७ हजार ३१६ पुगेकाे छ । ज्यान गुमाउनेकाे कुल संख्या ५१ हजार ४५ रहेकाे छ भने निकाे हुनेकाे संख्या १९ लाख १८ हजारभन्दा बढी रहेकाे छ । आइतबार मात्र त्यहाँ ५७ हजार ४०४ जना निकाे भएका छन् । अहिले ६ लाख ७८ हजारभन्दा बढीमा काेराेना भाइरस सक्रिय रहेकाे छ ।
उता काेराेनाबाट सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका र त्यसपछिकाे ब्राजिलमा भने पछिल्लाे समय दैनिक मृत्यु र संक्रमित संख्यामा कमी आउन थालेकाे छ । आइतबार अमेरिकामा ३६ हजार ८११ संक्रमित थपिएका छन् भने ब्राजिलमा २२ हजार ३६५ संक्रमित थपिएका छन् । ती दुवै देशमा आइतबार एक दिनमा ज्यान गुमाउनेकाे संख्या भने क्रमशः ५२२ र ५८२ जना रहेकाे छ ।
काेलम्बिया र पेरूमा पनि आइतबार क्रमशः ११ हजार ६४३ र १० हजार १४३ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने त्यहाँ क्रमशः २८७ तथा २०६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तर दैनिक मृत्युमा भारतपछि दाेस्राे नम्बरमा मेक्सिकाे रहेकाे छ । त्यहाँ आइतबार काेराेनाका कारण ६३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
सर्वाधिक दैनिक संक्रमण देखा परेका ११ देश